दुबईमा नेपालीले देखाइदिए इमान्दारी – MySansar
दुबईमा नेपालीले देखाइदिए इमान्दारी
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालीले चान्स पायो कि देखाइदिन्छ भनेर बिहीबार भाषण गरे। दुई चार वटा डल्ला फ्याँकेर चम्किएका सन्दीपको उदाहरण दिँदै उनले यसको भनेका थिए। नभन्दै उता दुबईमा समेत नेपालीले चान्स पाउँदा देखाइदिएका छन्।
कुरो के भने नि, केही दिनअघि दुबईको स्टारबक्स क्याफेमा पुलिसको टिमै त्यहाँ काम गरिरहेका नेपाली मिरन कार्कीलाई खोज्दै आए। लौ न के बित्यास पर्‍यो भन्ने लाग्यो सुरुमा। खासमा उनलाई समात्न हैन प्रशंसा गर्न आएका रहेछन् उनीहरु।
स्टारबक्स क्याफेको एमिरेट्स ब्रान्चमा त्यहाँ काम गर्ने कार्कीले एउटा ब्याग भेटेका थिए। एक जना पर्यटकले भुलेको त्यो ब्यागमा एक लाख १८ हजार अमेरिकी डलर र केही पासपोर्ट थिए। हालको विनिमय दर अनुसार यो रकम नेपाली रुपैयाँमा एक करोड २८ लाखभन्दा बढी हुन आउँछ।
तर कार्कीको मन यता उता भएन। उनले प्रहरीलाई सम्पर्क गरी त्यो ब्याग पर्यटकलाई फर्काउन सहयोग गरे।
त्यसैको परिणामस्वरुप उनका सहकर्मीहरुकै अगाडि प्रशंसा पत्र दिन प्रहरीको टिमै उनको काम गर्ने ठाउँमा आइपुगेको थियो। कर्णेल मोहम्मद अकिल अहली दुबई प्रहरीको क्रिमिनल इन्भेस्टिगेसनका डेपुटी डाइरेक्टर हुन्। उनले कार्कीको इमान्दारीको प्रशंसा गरे।
उनले प्रहरीलाई सहयोग गर्नेहरुलाई सम्मानित गर्न अभियान चलाएको बताए। यस्तो बेलामा के गर्नुपर्छ भन्ने उदाहरण कार्कीले पेश गरेको भन्दै उनको प्रशंसा पनि गरे।
दुबई प्रहरीले आफ्नो सोसल मिडियामा यसको भिडियो पनि राखेको छ।
6 thoughts on “दुबईमा नेपालीले देखाइदिए इमान्दारी”
कुरो यस्तो के,चारै तिर CCTV क्यामरा,फिर्ता गर्नु परो नि हजुर हरु
अनि पुरस्कार चाही कति पायो नि… कुरो 😉
Chitra Kandel says:
यिनै जस्ता इमान्दार नेपालीका कारणले गर्दानै हामी नेपाली लाई अझै पनि दुनिया ले विश्वास गर्छन र हाम्रो छबि एक इमान्दार अनि कर्तब्य निष्ठा को रुपमा हेरिन्छइ
हाल दुवै बाट
मिरन कार्की लाइ धन्यबाद, र बधाई! अहिलेको जमानामा एक लाख अठार हज्जार डलर झोलामा बोकेर हिड्ने कुन चै स्वाठ ‘गोरे’ रै’छ त्यो? #खुल्दुली
गौरीबहादुर कार्की says:
देशको इज्जत बढाएकोमा नेपाल सरकारले तक्मा दिएर सम्मान गर्नु पर्दछ ।
संघरत्न शाक्य says:
सलाम छ, नेपाली छोरोलाई !